Ukuqhagamshela kwi-Intanethi kwiindawo ezikude-iGeofumadas
Indlela yokuxhuma kwi-intanethi kwiindawo ezikude
Epreli, 2013 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Ndandihlala ndicinga ukuba ndizakwenza ntoni ukuba kuya kufuneka ndiye kuhlala kwidolophu encinci, apho ukufikelela konxibelelwano esilunandipha esixekweni kulinganiselwe. Ngakumbi ngoku kunokuba sizonwabisa ngezinto zonxibelelwano eziza ne-Intanethi zisenza sazi ii-imeyile ezintsha, iindaba kwiinethiwekhi zentlalo okanye ukuthumela umyalezo kwangoko.
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndikwazile ukuyibonisa, xa ndisiya kwiholide yeIsta. Endleleni ndiye ndaphawula ukuba isignali yeselula yayihlwempuzekile, ke imodem ayizange iphendule; nangona iakhawunti yeRoads isiza kum ngokungathi ndiyisebenzisile. Xa ndabuza umnini wehotele encinci yentaba malunga ne-wireless waphinda wandibona ngokungathi sisilwanyana esothusayo, wandixelela ukuba abantu beza apho ukuze banqumame ... kwaye uye wancoma i-Intanethi yeCafe kum malunga nemizuzu engama-45.
Kwakumnandi ukuba siphile usuku ngaphandle ndibona imeyile, isiza izimvo angekamodareyithwa ngaphandle manani ukuhlaziya, kodwa Ndiyoyika ke umnqweno abathengi kuba iimveliso okanye iinkonzo ukuba wanikela yaye apho usabele kwiiyure 6 zilandelayo ube uphawu lobuqhetseba okanye ukungaxanduva.
Ke ngoko, kuloo ezi- enika ubomi Ndafumana Gijon Spanish uwe elele ngomoyakazi, kunye iPad wayo mini ethetha nge FaceTime; Njengoko ndiyazi ukuba le nkonzo idinga i-broadband, ndaya kuye ndaza ndafunda ukufunda ngaphezu koko ndikulindele.
Kwiminyaka ethile edlulileyo, ukucinga ukuba sinokufikelela kwi-satelliteband broadband kwakungeke kwenzeke kodwa kuyabiza kakhulu. Ukucinga ukuba ngoku iyakwazi ukufezekiswa ngamanani avela kwi-24,90 Euros ngenyanga ayimangalisa; Kwaye kule bugcisa yenze imitsi emikhulu nakuba imigaqo iyafana kosana zeefoni eqhelekileyo, ngoku benikela Internet, TV kunye zeefoni ngaphakathi nangendlela efanayo.
Ku malunga ne Umgca wokubhalisa wedijithali, eyaziwa ngesivakalisi sayo ngesiNgesi ADSL (Umgca wokuBhalisa iNdijithali ye-Asymmetric), apho i-DSL eyaziwayo ilayisha kwaye ilayishe idatha kunye ne-asymmetry evumela ukuba udlale kunye nezikhokelo ukuze uthole uphawu olusisigxina; ngokuchasene nomqondiso wocingo oqhelekileyo apho oku bekuya kubakho kwi-akhawunti ebalulekileyo ekupheleni kwenyanga.
Kwimarike ngoku kukho iindlela ezimbini zokufumana adsl nge satellite:
Ngendlela ye-unidirectional. Oku kuyilungele ukuba ufuna ukuthenga isivumelwano ngokwahlukileyo ngenkonzo ye-intanethi.
Kwimeko e Spain SkyDSL inika iinkonzo ngenyanga ukususela 24,90 € enesantya 1,5 Mbit / s, endicinga ukuba kwamkelekile ukuba kucingwa ukuba Internet akukho ukuziphazamisa abantwana ukubukela iividiyo ku Youtube emva ekhaya kodwa isixhobo ukudibanisa neruthini zemfundo okanye ishishini.
Ilahleko lihlala lihlala kumgama wendlela ekufuneka sifaniswe ngayo nomlinganiselo wokulayisha / umxokozelo. Ngokubanzi, ukukhuphela kuphezulu kunokuba kulayishwe kodwa kukho iimeko ezikhethekileyo ezifana nokusebenzisa i-FTP ukulayisha ulwazi kumncedisi.
Ngendlela ehamba ngayo. Kule meko, i-modem ekhethekileyo isetyenzisiweyo, kunye neerhafu ezinamkelekileyo ezininzi xa sicinga oko adsl nge satellite ngathi i-SkyDSL kwisilinganiselo sayo seS Flat S inikeza i-6 MB yokukhuphela kwi-39.80 Euros kuphela. Phantse ixabiso elifanayo linikezela nge-Quantis.
Kuba eminye iminyaka, xa ndikhumbula ukuba ukhathazwa uphawu mgangathweni ngokusebenzisa iinkqubo cadastral koomasipala, ndiyacinga ngoku iinketho ngcono kakhulu. Ukongezelela, ubuchwepheshe buye baphucula amandla abo ekukhonzeni idatha ngeenkonzo zewebhu kwaye kungekhona iifayile eziqingqiweyo okanye iinkonzo zokuphela.
Enye yemingcele yayisoloko ilukhuni ukuba i-antenna kunye neenkcukacha zifumaneke nzima; ngoko baqeshwe. Njengamanje abanikezeli benkonzo banikezela ngezixhobo zokuqeshisa okanye ukubeka ngaphandle kokuba kwenziwe utyalo-mali.
Ke, ukuba ucinga ngokuthatha umhlala-phantsi kwifama yakho kwaye woyika ukunqanyulwa ... kufanelekile ukubonisana nabathengisi bengingqi adsl nge satellite.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GPS kwi-Android, i-SuperSurv yindlela ephezulu yeGIS
Post Next Oko kuchazwa yinguqulelo entsha ye-gvSIG 2.0Okulandelayo »